Ọtụtụ narị ndị mmadụ gbara ọgwụ mgbochi na ụlọ ọgwụ na UK na Delta
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ UK na -agbasa » Ọtụtụ narị ndị mmadụ gbara ọgwụ mgbochi na ụlọ ọgwụ na UK na Delta
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa • Akụkọ dị iche iche
Ndị ọkachamara na-adọ aka na ntị na 'ọgwụ mgbochi anaghị ewepụ ihe egwu niile' nke ụdị Delta na-efe efe nke ukwuu ugbu a bụ pasent 99 nke ọrịa COVID-19 niile na UK.
Enwere akara ndị mbụ na jabs nwere ike ọ gaghị akwụsị nnyefe Delta.
Ọgwụ mgbochi niile a na -eji na UK chọrọ ka ndị nnata nweta ọgwụ abụọ iji gbanye ya nke ọma.
Ihe dị ka pasentị iri asaa na ise nke ndị okenye UK enwetala mgbọ abụọ ruo taa.
Na mmelite coronavirus ọhụrụ ya, Ọha Ọha na Ahụike England (PHE) dọrọ aka ná ntị banyere ihe ngosi mmalite na ndị mmadụ nwere ike ịgba ọgwụ mgbochi nwere ike nwee ike ibunye Delta Delta nke COVID-19 ngwa ngwa dị ka ndị na-enwetaghị ọgwụ ọ bụla.
Dabere na mwepụta PHE, ọtụtụ narị ndị mmadụ gbara ọgwụ mgbochi ọrịa na UK ejirila ụdị Delta Delta-19 na-efe efe nọrọ n'ụlọ ọgwụ.
Site na Julaị 19 ruo Ọgọst 2, 55.1% nke mmadụ 1,467 nọ n'ụlọ ọgwụ nwere ụdị Delta enweghị ọgwụ mgbochi, PHE kwuru, ebe 34.9% - ma ọ bụ mmadụ 512 - natara ọgwụ abụọ.
Julaị 19 bụ ụbọchị ewepụrụ mmachi mkpọchi mkpọchi na UK.
Ọgwụ mgbochi niile a na-eji na United Kingdom-nke AstraZeneca, Moderna na Pfizer-BioNTech mepụtara-chọrọ ka ndị nnata nweta ọgwụ abụọ ka a gbaa ha ọgwụ nke ọma.
PHE kwuru, "Ka ọtụtụ ndị mmadụ na -agba ọgwụ mgbochi ọrịa, anyị ga -ahụ pasent dị elu nke ndị a gbara ọgwụ n'ụlọ ọgwụ," PHE kwuru.
Jenny Harries, onye isi ụlọ ọrụ na UK Health Security Agency, kwuru na ọnụ ọgụgụ ụlọ ọgwụ gosiri "ọzọkwa na ọ dị mkpa na anyị niile na -abịa n'ihu ịnata ọgwụ mgbochi abụọ ozugbo anyị nwere ike ime ya".
Felix Harrington ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 10, 2021 na 14:23
Ọgwụ COVID-19 nnwale nnwale anaghị enye mgbochi ọ bụla ma ọ bụ gbochie onye ọ bụla ibute ọrịa, mana ha na-ebute nnukwu mbibi gụnyere ọnwụ, ma na-ebuputa usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ ka ọ kpughee ikpughe nje ahụ n'ọdịnihu dị ka anyị na-ahụ. Naanị ndị na -etinyebeghị ọgwụ mgbochi ọ bụla n'ime ọgwụ ndị a nwere ike nweta mgbaghara.
Onye nlekọta ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 8, 2021 na 06:08
Nigrdom, ọ dị m mma?
Gerard Wirth ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 7, 2021 na 20:41
Nọmba ụwa anaghị akwado ndị were Astra Zeneca… ụdị akụkọ a ga -egosi ọnụọgụ ndị were ọgwụ mgbochi ọ bụla n'otu n'otu na iche maka onyo gụrụ akwụkwọ.
UGBU a… .. ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa enweghị ike isi na windo tụpụ ọzụzụ niile nke mgbochi covid. Ọ bụrụ na ndị mmadụ eleta gị ọbụlagodi ma ọ bụrụ na mkpuchi mkpuchi mkpuchi na -ezere ma zere ịdị nso anụ ahụ. Ọ nwere ike kpasuo onye ọ bụla mana nke a ga -enyere aka. Ndụmọdụ kacha mma anaghị aga nnukwu nnọkọ ụfọdụ 'obere ihe nkpuchi'… na-eyi n'ụgbọ njem ọha ... .. n'ọfịs ma ọ bụ na-arụ ọrụ otu.
Paul Hudson ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 7, 2021 na 20:00
Ee mana gịnị bụ ọnụọgụ ọnwụ? Nhọrọ maka ihe omume. Ọ bụrụ na ndị gbara ọgwụ mgbochi ọrịa butere obere pasent nwụrụ ma ọ bụ chọọ ụlọ ọgwụ, kedu mgbe Covid ga -adị ka ọrịa nkịtị?